Waxaanu ku dadaalaynaa in ilmahaaga guriga la geeyo sida ugu macquulsan ee ugu dhakhsaha badan. Marka guriga la joogo waxa yaraada infekshanada waxaadna fursad u heleysaan in aad idinka iyo ilmuhiinu aad si deggan oo nabad ah isu barataan. Carruuraha dhicisnimada iyo jirooyinka ku dhasha ee isbitaalka lagu daaweeyo qaarkood waxa lagu daryeela oo daawooyinka lagu siiyaa guriga (daryeelka guriga) marka ay isbitaalka ka baxaan kadib. Carruurta qaarkood waxa la socda oo dabagal ku sameeya (neonatalmottagningen), laakiin carruur badan waxa la wareegta xarunta daryeelka dhalaanka (BVC) iyaga ayaa la socda oo ku sameeya baaritaano caafimaad iyo talaaladaba. Haddii uu ilmahaagu jirado marka uu ka baxo isbitaalka waxaad marka hore la xiriiraysaa rugta caafimaadka (vårdcentrelen) ama waxaad wacaysaa telefoonka hagida ee 1177.
Daryeelka guriga carruurta ku dhasha dhicisnimada iyo jirooyinka
Xarumaha carruurta ku dhasha dhicisnimada iyo jirooyinka
Ilmaha dhallaanka ah ee guriga lagu daryeelayo
Akhri sida aad adigu u hubinayso sidii uu ilmahaagu u lahaan lahaa heerkulka jirka oo wanaagsan
Akhri sida aad uga hortegeyso dhimashada degdega ee dhallaanka iyadoo la adeegsanayo habka hurdada iyo sariirta
Tababbarka muruqaha qoorta
Sidan ayaa u xoojinkartaa muruqyada qoorta ee ilmahaaga
Talooyin ku saabsan habka iyo goorta aad ilmahaaga dhashay u qobeynkartid.
Akhri sida looga hortago daryeelka maqaarka marka aad xafaayadda beddesho.
– khataraha infekshanada, nadaafada gacmaha iyo tubaakada.
Akhri lisidda naasaha iyo sida loo maareeyo caanaha naasaha laga liso.
Kaydinta caanaha naasaha iyo beddelka caanaha naasaheeda hooyada
Akhri waxyaabaha ku saabsan raagida/cimridheeraanta iyo kaydinta caanaha naasaha iyo beddelka caanaha naasaha hooyada
Sidee ayaad adigu u ilaalinkartaa xaaladda guud ee ilmahaaga?
Lix qoddob ayaa haboon in fiiro gaar ah indhaha loogu hayo